Nzira 5 dzekutyaira Yakawanda Traffic kune Yako WordPress Blog - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 Nzira dzekutyaira More Traffic kune Yako WordPress Blog
Kana iwe uine dambudziko ne low traffic pane yako WordPress blog, kana kuti uchangotanga, iwe uchada yedu inogoneka gwara rekuwedzera traffic. Tine chokwadi kuti unotozviziva zvemukati mambo uye zvakakosha sei kuisa zvinhu zvinoonekwa mumablog ako, saka ngatitarisei kumatipi akaedzwa uye akaedzwa ayo anounza mhedzisiro.
Tichapindura mibvunzo yako pane izvo zvinokwezva vanhu kune yako saiti, maitiro ekuwana ako tarisiro vateereri uye zvipi zvekunze zvaunofanira kufunga kuti utyaire traffic
SEO ishamwari yako
SEO ndiyo nzira yekuita kuti webhusaiti yako iwedzere kutsvaga injini inoshamwaridzika. Hazvina mhosva kuti yako saiti inodzidzisa uye kunakidza sei, kana isina kugadziridzwa, haizoratidze pakutsvaga kwevanhu. Pane matanho aunotora iwe pachako, pasina kuda kuhaya nyanzvi.
Ita shuwa kuti ma URL ako akagadzirwa uye taura nyaya yeiyo peji rekumhara. MaBlog ako anofanirwa kuve nyore kuverenga, kuve nemusoro unokwezva uye mapikicha makuru. Shandisa keyword research maturusi ekuti uone misoro irikutsvagwa nevanhu nekunyora zvirimo maererano.
Gadzirisa zvemukati zvemukati zvakare. Ita shuwa kuti ako mapikicha akakura maererano neyako dhizaini, ave nemazita, zvinyorwa uye alt zvinyorwa zvakazadzwa mukati. Pese pazvinenge zvichibvira, shandisa zvepakutanga mifananidzo uye zvinoonekwa. Ichapa yako saiti chitarisiko chehunyanzvi uye iwe unogona kuenzanisa ako anoonekwa kune yako saiti dhizaini.
Paunenge iwe wagadzira iyo SEO zano, ita shuwa yekuisa inotarisisa pakumhanya kwenzvimbo yako futi. A zvakagadzirwa zvakanaka WordPress saiti isingarere uye inopa ruzivo rwakakosha ndiyo yekupedzisira chinangwa pano.
Gadzira zvakakosha zvemukati
Ehezve, iwe unoda kutaura nezve kushamisa kwechiratidzo chako, zvigadzirwa uye masevhisi ari. Hapana ari kusahadzika mufaro wako nezve zvitsva zvitsva kana kukuudza kuti udzikise hukuru hwezvigadzirwa zvako nemasevhisi.
Nekudaro, kana zvemukati zvako zviri zvekushambadzira chete, hausi kupa vateereri vako chikonzero chekubaya pane yako saiti. Panzvimbo pekugadzira izvo zvisina chinhu, nyora mablog anopa kukosha uye chaizvo anobatsira vateereri vako.
Nguva dzese paunogadzira chigadzirwa chitsva, pane kungo chiisa kune vateereri vako, nyora mablog anovabatsira kuti vanzwisise mashandisiro avo, kuasanganisa nezvimwe zvigadzirwa uye kuzadzisa zvinangwa zvavo zvemazuva mazhinji nazvo.
Iwe hausi kuvatengesera chigadzirwa chako, uri kutengesa imwe mararamiro, bhizimisi zvinangwa, kupa vanhu nguva yakawanda nokuda kwavo nezvakadaro. Saka nguva inotevera paunotanga kunyora blog, funga nezve izvo vanhu vanoda kuverenga nezvazvo.
Mushure mezvose, ndiyo nzira iyo vazhinji vashanyi vanowana yako saiti, Googling yemhinduro kudambudziko ravo. Usatarisira pasi simba revarairidzi uye sei-tos. Gadzira runyorwa rwemazano eblog uye chengeta kune yenguva nenguva yekutsikisa chirongwa.
Mazhinji emablog aya anogara ari egreen, saka isa mhando yezvako zvemukati mukutarisa. Mamwe marudzi ezvinyorwa anozove nezuva rekupera, kuti iwe ugone kutamba uchitenderedza nesitayiti uye mareferenzi.
Paunenge uchinyora, ita shuwa kuti uchengetedze zvirimo zvive nyore uye zviri nyore kuverenga. Vateereri vako havazove padanho rakaenzana rehunyanzvi sezvauri saka ita chokwadi chekugadzira zvinonzwisisika zvemukati zvinovabatsira kugadzirisa nyaya pane kuvasiya vakavhiringidzika.
Nzira huru yekuchengetedza zvemukati kuti ubatanidze ndeye kushandisa Inverted Pyramid maitiro ekunyora. Ona pano mamwe mienzaniso yeiyo inverted piramidhi maitiro yekunyora, gadzira zvimwe zvinomanikidza zvinyorwa uchishandisa nzira iyi.
Yemukati yekubatanidza VS backlinks
Paunenge uchinyora mablog, zvakakosha kuti iwe ubatanidze kune mamwe mablog ari pane yako saiti. Ichabatsira mu yako SEO kuedza sezvo zvemukati zvinongedzo zvichibatsira Google kunzwisisa hukama pakati pezvinyorwa zvakabatana pane yako saiti.
Zvinyorwa zvakabatanidzwa zvakare zvinobatsira iwe kudzikisa yako bounce rate sezvo ichikoka vanhu kuti vagare pane yako saiti. Zvimwe kunze kwekubatanidza zvemukati, iwe unofanirwa zvakare kushanda mukugadzira iyo yakapfuma webhu ye backlinks. Ivo vane hunyanzvi zvakanyanya kuGoogle chinhanho uye vanopa yako saiti chiremera pakati pevateereri vako.
Tora mukana wemagariro enhau
evanhu vezvenhau ndiyo nzira huru yekuparadzira chiziviso cherudzi, kusimudzira chigadzirwa chako uye masevhisi uye gadzira yakavimbika vatengi base. Ichowo inzira yakanaka yekutungamira vanhu kune yako saiti. Goverana ako mablog uye zvimwe zvirimo pasocial media asi ita shuwa yekutevera iyo 80-20 mutemo.
Zvinoreva kuti makumi masere muzana ezvenhau dzako zvemagariro anofanirwa kunge ari ekudzidzisa uye anosetsa, nepo chete 80% inofanirwa kunge iri yekusimudzira. Kana uri kushandisa pasocial media kungosimudzira mhando yako, hausi kupa vanhu zvikonzero zvakakwana zvekukutevera.
Kune izvo zvinotumirwa zvakatenderedza zvigadzirwa nemasevhisi ako, ita shuwa yekuisa chinongedzo kune chaiyo yekumisikidza peji. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn uye Google Analytics ichakupa kunzwisiswa kuri nani kwevateereri vako uye kana iwe ukafunga kudyara mumisangano yemagariro enhau, iwe unenge uchinyatsoziva kuti ndiani waunofanira kunongedza.
Kana iwe uri kushandisa anopfuura imwe pasocial media chikuva, ndapota usagovane mhando yezvinyorwa. Izvozvo hazvizopi vateereri vako kukurudzira kuti vakutevere pane zvakawanda Mapuratifomu uye achapa husimbe vibe.
Koka vaenzi mabloggi
Nzira huru yekusimudzira yako mhando uye kutyaira vashanyi kune yako saiti kukoka vaenzi mabloggi kuti vagadzire zvemukati zvewebsite yako. Izvi zvinopa yako saiti zvitsva zvemukati yakanyorwa kubva pane akasiyana maonero uye ichakupa iwe kuwedzera kwevashanyi, kana vateereri vavo vazozviziva.
Ita shuwa yekutora vanyori vane izwi rakasarudzika uye vanogona kugovana ruzivo rwavo nezvako zvigadzirwa kana masevhisi. Unogona kuenda kune mumwe munhu wausingafunge kuti ave padyo nevateereri vako kuti uwedzere kusvika kwako.
Iwe unogona kugara uchikumbira blog kudzoka kuti iwe ugone kunyora blog kune yavo saiti uye kusvika kune avo vateereri. Kana iwe ukaita izvi pamwedzi kusvika pamwedzi hwaro, iwe uchakurumidza kuve nerwizi rwakanaka rwevashanyi vanobva kumativi ese.
Paunenge iwe wawana hang hang mairi, gadzira runyorwa rwemitemo uye uzvishambadze pane yako saiti pamwe nefomu rekusaina kune vanovimbisa vanyori uye mabloggi ekuzadza.
Yako WordPress saiti inofanirwa kugara ichishandiswa kana iwe uchida kuti ikure. Chengetedza nguva yako mukutsvaga zvakanakira zviwanikwa, madingindira, vanyori uye mazwi akakosha eblog rako. Ukangotanga kushandisa matipi edu, iwe uchaona yakanaka mhedzisiro, asi ramba uchifunga kuti ichi chienderera mberi.
Petra Odak ndiye Chief Marketing Officer ku Better Zvirongwa, iri nyore asi rinoshamisa simba chikumbiro software chishandiso chinokubatsira iwe kutumira yakachinja-yepamusoro, webhu-based bhizinesi zvirevo mumaminetsi. Iye anogadzirisa-anotungamira kushambadzira anofarira ane anopfuura makore mashanu ezviitiko munzvimbo dzakasiyana dzekutengesa uye manejimendi manejimendi.
Iyo Yakarurama Nzira Yekuita Keyword Ongororo Muna 2021
Aug 9 | Keyword Research, SEO
Maitiro Ekuita Inotarisirwa uye Inobudirira SEO Keyword Sarudzo?